The Chronicles of Evil (2015) | MM Movie Store
စုံထောကျ Choi Chang-Sik ဟာ သမ်မတကိုယျတိုငျ ခြီးမွှငျ့တဲ့ ထူးခြှနျဆုကိုရရှိထားပွီးဌာနမှာ ရာထူးတိုးဖို့ အလားအလာနသေူတဈယောကျပါ။ဆုခြီးမွှငျ့ခံရသညျ့ည ဂုဏျပွုညစာစားပှဲမှအပွနျလမျးမှာကားမောငျးသမားယောငျဆောငျထားတဲ့ လုပျကွံသူ၏တိုကျခိုကျမှုကို ခံခဲ့ရပါတယျ။
နှဈယောကျသား ရုနျးရငျးဆနျခတျနဲ့ တိုကျခိုကျနကွေရငျးChoi Chang- Sik မှ မတျောတဆ လကျလှနျသှားခဲ့ပါတယျ။ရာထူးတိုးဖို့အကွောငျးရှိနတောကွောငျ့ အမှုကို ဖုံးကှယျဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့နောကျနမေ့နကျမှာ တဈစုံတဈယောကျက ဂနျးနမျရဲစခနျးရှမှေ့ာအလောငျးကို လာခြိတျထားခဲ့ပါတယျ။
ထောငျခြောကျမိသှားမှနျး သိလိုကျရတဲ့ Choi Chang-Sik တဈယောကျမိမိကို ဦးတညျတိုကျခိုကျရခွငျးရဲ့ နောကျကှယျက အဖွဈမှနျကိုတိတျတဆိတျ စုံစမျးဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။လူသတျမှုကိုပဲ ဆကျလကျဖုံးဖိထားနိုငျမလား?????
လှနျခဲ့တဲ့၁၅နှဈက အဖွဈမှနျတှပေဲ ပွနျရှာတှသှေ့ားမလားဆိုတာကတော့The Chronicles Of Evil မှာ စိတျဝငျစားဖှယျ ကွညျ့ရှုရမှာပါ။မငျးသားPark Seo Joon ပါဝငျတဲ့အပွငျစုံထောကျအကျရှငျမငျးသားကွီး Ma Dong Seok ကပါ ပါဝငျအားဖွညျ့ထားပွီးRatingကောငျးခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးလေးပဲဖွဈပါတယျ။
စုံထောက် Choi Chang-Sik ဟာ သမ္မတကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်တဲ့ ထူးချွန်ဆုကိုရရှိထားပြီးဌာနမှာ ရာထူးတိုးဖို့ အလားအလာနေသူတစ်ယောက်ပါ။ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့်ည ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲမှအပြန်လမ်းမှာကားမောင်းသမားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ လုပ်ကြံသူ၏တိုက်ခိုက်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်ယောက်သား ရုန်းရင်းဆန်ခတ်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေကြရင်းChoi Chang- Sik မှ မတော်တဆ လက်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာထူးတိုးဖို့အကြောင်းရှိနေတာကြောင့် အမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်နောက်နေ့မနက်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်က ဂန်းနမ်ရဲစခန်းရှေ့မှာအလောင်းကို လာချိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ထောင်ချောက်မိသွားမှန်း သိလိုက်ရတဲ့ Choi Chang-Sik တစ်ယောက်မိမိကို ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အဖြစ်မှန်ကိုတိတ်တဆိတ် စုံစမ်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူသတ်မှုကိုပဲ ဆက်လက်ဖုံးဖိထားနိုင်မလား?????
လွန်ခဲ့တဲ့၁၅နှစ်က အဖြစ်မှန်တွေပဲ ပြန်ရှာတွေ့သွားမလားဆိုတာကတော့The Chronicles Of Evil မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်ရှုရမှာပါ။မင်းသားPark Seo Joon ပါဝင်တဲ့အပြင်စုံထောက်အက်ရှင်မင်းသားကြီး Ma Dong Seok ကပါ ပါဝင်အားဖြည့်ထားပြီးRatingကောင်းခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။